Mpisolovava, ny raki-bolana malalaka - Ny mpahay lalàna any Danimarka. Rehetra ny mpisolovava an-Tserasera
Tamin'ny volana martsa taona, dia mifantoka amin'ny ny sakafo sy zava-pisotroAzonao atao ihany koa ny mandray anjara eo ny taona forårskonkurrence. (Vakio eto ny momba ny sitenotice) Mpisolovava na ny mpisolo vava (tamin'ny taona fotoana ihany koa ny hoe ny tanàna) dia mpisolovava, izay, eo amin'ny fototry ny manokana ny fanendrena dia manome ara-dalàna consulting services sy ny manana ny zo manokana ny fitondran-tena ara-dalàna ny fitsarana ny hafa. Hetra, voalaza ampiasaina ao amin'ny s, ao anatinà vanim-potoana ny fihenan-danjan'ny ny zavatra Lalàna.
Frantsay: Fisc (fiscus) dia ny hevitry Trésor de l'etat, ny tahirim-bola.
Ny zavatra Hetra, araka ny. Berlin ofisialy mihazona ny tahirim-bola-panjakana ny vola miditra-mitaiza interesserdette taty aoriana dia tonga ho tafiditra 'hanohy ny heloka bevava atao amin'ny fanjakana ny lalàna', izay Berlin mifandray amin'ny mahazatra strafudsoning amin'ny endrika onitra. century dia fantatra amin'ny heviny kokoa ambany Hetra-bestallinger: 'Ankapobeny, ny Ady, ny Polisy, ny Farihy, eo Ambany, Vejfiskal', raha Berlin koa milaza ny Firenena sy Faritany-fiskaler. Ireo anjara fanompoana tao amin ny Ny zavatra fisotroana fikambanana, eo ambanin'ireo famantaran'ny, saingy fotoana fohy ihany ampiasaina.
Amin'izao fotoana izao dia nampiasa ny teny toy ny teny dia, mba hamaritana ny toe-javatra izay mifanaraka tsara amin ny toetry ny fitantanam-bola.
Prokurør frantsay: merlin, niainga tao kalalao ny Rakibolana avy momba ny taona.
Torohevitra ho an'ny mpanjaka na ny manam-pahefana - ny eveka, noblemen ny lalao olaimpika.
Tybjerg dia mamaritra ny teny hoe toy ny efa lany andro. Ao amin'ny fitondram-panjaka ny fotoana niasa Generalprokurøren ao amin'ny chancellery, saingy intsony rehefa Hitondra Algreen-Ussings birao. Ny tanàna ao amerika procurator, fantatra avy Ludvig Holberg ny fotoana dialectical Prikkerater, hafa ny dikany ao amin ny tenim-paritra, ary eo anivon ny mpanjono, ny klæpål, izany hoe. ny eel amin'ny lehibe ny loha ary mifanohitra amin'izany, ny klæpål ihany koa ny hoe ny tanàna. Ny tanàna nandritra ny fotoana ela - ny s sy - ampiasaina amin'ny mirazotra amin'ny mpisolovava.
Taorian'ny Sagførerloven ny ampiharina ihany ny mpisolovava izay efa nandray ny mpanjaka anaram-boninahitra.
Ny mpahay lalàna ao amin'ny teny endrika (advocatus), ny antitra anarana ao amin'ny isan-karazany royal-zavatra ny lalàna sy ny fitsipika avy amin'ny ny moyen âge ny mpanjaka mpanelanelana (governemanta ofisialy) na ankapobeny fahefana lehibe kokoa ny ampahany amin'ny firenena, izay taty aoriana nantsoina hoe ny herinaratra maotera.
Ny advocatus niseho tao ny contraction, ny tavaratra anaran 'bailiff'.
Izany haingana nahazo ny dikany hafa sy ny nampiasaina ny zana-mpitandrim-pananana, izay supervises ny roa tonta fa isaky ny fivondronana ampiasaina. Izy ireo tatỳ aoriana, mba herredsfogeder. Tara nandray ny fanendrena ny mpahay lalàna ny amin'izao fotoana izao ny maha-zava-dehibe.
Manokana mifandray Fiskalens asa embedsforsømmelser
Indrindra ampiasaina amin'ny Danemark, ny teny hoe mpisolovava ny mpanjaka voatendry torohevitra ao amin'ny fitsarana Tampony. Mitsambikina, ary tsy maintsy manao mipetraka ao enkekassen, fa tsy pensionable. Ihany izy ireo, afaka mba miangavy toe-javatra ho an'ny hafa ao amin'ny fitsarana Tampony, nefa, ankoatry ny, koa izy ireo handeha any amin'ny fitsarana noho ny ambany ny fitsarana. Araka ny lalàna ny. mety dia tsy misy intsony voatendry ny mpisolo vava avy amin'ny fitsarana Tampony ny mpanjaka, raha ny ho avy ireo mpisolovava ambony ao amin'ny firenena ny fitsarana dia tendren'ny minisitry ny fitsarana sy ny mpitarika ny anaran' højesteretssagførere.
Tamin'ny taona, ny teny dia mpisolovava, nofoanana noho ny soa ny mpahay lalàna.
Ireo izay nanana ny anaram-boninahitra ny mpisolovava, landsretssagfører na andraikitra, na izany aza, afaka manohy ny fampiasana ny anaram-boninahitra. Rehefa ny tsy refesi-mandidy nampidirina manokana mpanjaka advokatembeder ny zavatra fisotroana fikambanana lapsed, raha kammeradvokatens ihany no azo fenoina amin'ny alalan'ny fanendrena. Advocatus regius dia amin'ny alalan'ny didim-panjakana ny. martsa miasa ho an 'ny andrefana Ejlande' ny adidy mba hanao ny zava-drehetra ny fiahiana ny mpanjaka kasses mahaliana tsara indrindra na ny fianakavian'ny mpanjaka ny zavatra mahaliana. Io birao dia tahaka ny kammeradvokatens ihany no nipetrahan'ny ny lalàm-panorenana ao amin'ny zanatany tamin'ny taon-dasa. Any Danemarka, dia mitaky mari-pahaizana momba ny lalàna mba ho lasa mpisolovava sy telo, fara fahakeliny taona dia miasa amin'ny fomba ara-dalàna ny orinasa (matetika tahaka ny fampanoavana) sy ny fanendrena ny minisitry ny fitsarana mba miangavy toe-javatra ao amin'ny fitsarana. Ny toe-piainana noho ny ho mpisolo vava, dia voalaza ao amin'ny fehezan-dalàna sivily ny fomba. Izany dia fepetra takiana mialohan'ny ahafahana nahazo ny fahazoan-dalana ho fampiharana ny lalàna, ny ny kandidà efa nandinika ny teorika advokatuddannelse (natolotry ny trano fisotroana Fikambanana) ary samy efa nandalo ny teorika bar fanadinana sy ny fitsapana ao retssagsførelse. Advokattitlen dia voaaro anaram-boninahitra, ary ny olona izay tsy mbola nantsoina ho ao amin'ny bar toy ny mpahay lalàna, mety tsy milaza ny tenany ho toy izany na amin'ny fanendrena toy izany koa fa mety ho sahiran-tsaina miaraka amin'ny mpahay lalàna. Ny fehezan-dalàna mamaritra ny sazy ho an'ny fanitsakitsahana izany. Araka ny lalàna misy.
Jona ny mikasika ilay fanitsiana ny ny fitantanana ny rariny (Fanitsiana ny lalàna momba ny asa matihanina ny mpahay lalàna), ny zavatra Antenimiera nandray bl.
mba hanamaivana ny møderetsmonopol. Nisy nanokatra ny hafa ara-dalàna ny solontenan'ny noho ny mpisolovava mety hihaona amin'ny toe-javatra rakotry ny notsorina inkassoproces (toko faha-efatra amby efa-polo tamin'ny mba ho fandoavam-bola), småsagsprocessen sy eo ambanin'ny general udlægsforretninger fitsarana. Ny fialam-boly ny mødemonopolet niditra tao an-kery ao amin'ny. Ny volana janoary. Any Norvezy dia niantso ihany koa ny mpisolovava izay manana ny zo hanambara toe-javatra noho ny fitsarana Tampony, ireo mpisolovava na ny fitsarana tampony fisotroana fikambanana. Ao Eoropa nampiasa ny mpisolovava matetika mba hilazana ny mpisolovava, izay manao amin'ny vahoaka sy am-bava hovedforhandling ao an-trano sy ny heloka bevava. Any Ecosse, izay, marihina fa ireo, ary koa ny rehetra ny barrister amin'ny mpisolovava tsy misy maha-samy hafa mitondra anarana mpiaro (mifanohitra amin'izay aza, tsy kontorsagførere, antsoina hoe 'fahazoan-dalana'), manokana ny Tompo no Miaro, iza no miandraikitra manontolo ny scottish advokatur na sagførerstand. Izy dia ho any amin'ny ministera sy ny fiovana amin'ny izany, ary raha ny marina dia karazana sekreteram-panjakana ho an'ny Scotland ny raharaha. Tany Angletera, pays de Galles, Irlandy avaratra sy ny Repoblikan'i Irlandy no antsoina hoe procerende torohevitra, fa tsy ho an'ny mpahay lalàna, fa ny 'barristers' ao fa izy ireo dia mpikambana ao amin ny 'bar' (bar association). Tany Danemark no maha mpampanoa lalàna, izany hoe. mpisolovava afaka (ofisialy) dia manatanteraka karazana asa ao anatin'ny sehatry ny asa. Specialization dia nanjary miely patrana any ny asa ara-dalàna, indrindra fa ao ny lehibe kokoa ny lalàna orinasa. Maro lalàna sy ny orinasa dia toy izany no zaraina ho maro ny foto-kevitra faritra, ohatra orinasa lalàna, sy ny fomba fanao (litigation), real estate, asa ny lalàna, ny hetra lalàna, sns. Ny orinasa ireo mpisolovava avy eo voatendry ny iray na maro amin ireo fitsipika mba hahazoana mari-pahaizana momba ny specialization. Ny halehiben'ny sy be pitsiny no iray amin'ireo antony maro ny orinasa mitady specialization fa tsy mba miasa amin'ny generalists. Mpisolovava afaka mahazo ny zo hita taloha samy hafa ny fitsarana tao Danemarka. Ny nybeskikket mpisolovava ihany no manana zo ny mpanatrika mialoha ny fitsarana ambaratonga voalohany, izay no ohatra voalohany ny zavatra ara-dalàna ny rafitra. Avy eo dia, dia afaka mahazo tsara ny mpanatrika mialoha ny fitsarana. Mety ho ny maha-zava-dehibe amin'ny toe-javatra izay dia niantso avy ny fitsaram-ny fitsarana avo. Ny mpahay lalàna dia tsy maintsy, mba hahazoana fahazoan-dàlana, ny santionana ao amin'ny fitsarana ambony (landsretsprøven) mampiseho fa izy izy dia tsara litigator. Ny mpisolovava tokony, toy ny fitsipika, ahitana ny roa fitsapana toe-javatra mba hahazoana tsara ny mpanatrika mialoha ny fitsarana avo. Mpisolovava, izay mahazo zo hiseho mialoha ny fitsarana avo, dia afaka manoratra (L) araka ny anarana. Farany, ny mpisolovava afaka ny hahazo tsara ny mpanatrika mialoha ny fitsarana Avo, araka izay izy izy dia ho afaka manoratra (H) araka ny anarany.
Niaiky ny fitsaran ny fitsarana Tampony dia mifandray amin'ny ny sasany voninahitra.
Ny (H) izy dia hoy izy tao anatin'ny dimy taona, hihaona, fara fahakeliny, folo heny ao amin'ny fitsarana ambony.
Ny mpisolovava izay efa azony tsara ny mpanatrika mialoha ny fitsarana avo, dia lasa niantso landsretssagførere, raha mpisolovava iray izay nampidirina ny fitsaran ny fitsarana tampony, ny atao hoe adidy.
Ireo anaram-boninahitra no sisa ao an-day, izay rehetra mpisolovava manana ny anaram-boninahitra iray ihany.
real estate - Gyldendal - Davaky Store Danske
विमा आणि पेन्शन